Bulchiins Joo Baayidan Baqattootaa biyyaa Heeyiti irraa Yunaayitid Isteetti ce’an ilaalchisee qeeqa irratti dhihaateef deebii kenne jira.
Biyyaa iyyumaadhaa fi hookkoraan rakkachaa jirtu Haitii iraa kan ka’an baqattoonii kumaatamaan lakkaawamaan kara kibba Yuniyitid isteetsn daangaa Meekisikoo fi Amerikaa darbanii koola galtumaa gaafachuuf kutaa biyya Yunaayitid Isteets Teeksaasin seenanus bulchiisn Joo Bayidan garuu caalaa isaanii qabuudhaan fedhii isaanii malee gara heyitiitti deebiseeraa.
Tarkaanfii kana mormuudhaan Biyyaa Heyitiitti jila Addaa yunaayitid Isteets kan turan Daani’el Footee hojii isaanii yemmuu gad lakkisan wanntii ta’e al namummaadhaa fi deebii gaarii hintaanee waan qabuudaa jedhanii tarkaanfii mootummaa isaanii qeeqaniiru.
"Heyiti irratti imaammatin nu qabnu gad fageenyaan laafaadha. Yaadin anii keenne fudhatama hin arganne"
Jedhan Daani’eel Footee.
Qeequmsa kanaaf kan deebii kennan Ministirri dhimma alaa Yunaayitid isteets Antonii Biliinken, mootumaan isaanii dhimmia baqqattootaa Heyiti ilaalchisee sadarkaa hoggantoota ol anooti yaada Daani’eel Footee dabalatee filannoo adda addaa irrati marii garaa garaa taasisuu isaa dubbataniiru.
Dhumaa irrattis tarkaanfii amma fudhatame irratii akka walii galame himanii qeeqa bakka bu’aan mootummaa isaanii dhiheessaan mormaniiru.